Otomaatiga 2 gogo 'daasad qalin qalin mashiinada samaynta, Shiinaha Automatic 2 gogo' daasad qalin qalin mashiinada samaynta mashiinada-saareyaasha, shirkado cusub, warshad - G STAR TRADING LIMITED
Otomaatiga ah 2 gogo 'daasad ayaa qalin qalin ku samayn kara mashiinnada samaynta sanduuqa
Number Model: TM0001
Ku habboon soo saarista qasacaddo laba-xabbo ah
● Tirada idaacadaha waxaa lagu go'aamin karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha, illaa lix idaacadoodna isku mar ayaa la shaabadeyn karaa si loo yareeyo kharashka shaqaalaha loona gaaro hawlgallo wax-ku-ool ah.
● Waxay qaadataa nidaamka kontoroolka korantada ee laga soo dhoofiyo Japan iyo Mitsubishi servo mootada.
Screen Shaashadda taabashadu waa is-dhexgal Shiineys ah, hawl-fudud, hawl-fudud, iyo mishiinka adeegga ayaa loo isticmaalaa sida qalabka riix riixa, quudintuna waa sax:
● Qalabka waxaa lagu qalabeeyay qalab difaaca aaladda dareeraha sawirka iyo qalabka digniinta. Haddii qalabka lagu arko inuu cilladaysan yahay, si otomaatig ah ayuu u istaagayaa oo u dhawaaqayaa alaarmiga wuxuuna soo bandhigayaa meesha cilladdu ka jirto shaashadda taabashada.
● Qalabku wuxuu ku qalabeysan yahay nidaam saliidayn otomaatig ah otomaatig ah si loo hubiyo in qalabku muddo dheer shaqeeyo.
● Marka loo eego mabda'a makaanikada farsamada, awoodda feedhka ee qalabka ayaa la kordhiyay.
Marka loo eego mabda'a khilaafaadka ee xawaaraha-xawaaraha sare, adkeysiga iyo xasilloonida feedhka sare iyo hoose ayaa la hagaajiyay.
Pun Feerka kore iyo kan hoose waxaa loogu talagalay saddex god oo ay ku dhintaan shank ahaan siday u kala horreeyaan. Marka loo eego qaab dhismeedka badeecada, hal-dhinasho feer ah ama laba-laab feer ayaa la dooran karaa
Awood wax soo saarka caaryada feerka ah 20pcs / min-50pcs / min
Awoodda wax soo saarka caaryada Double feer 40pcs / min-100pcs / min
Quudinta mootada adeegga 600W
Xakamaynta PLC FXIN60MT
size Machine 4000X655X1850mm
miisaanka Gross 4000kgs
Mashiinkayaga mashiinka sameynta ee 2 Pieces Tin Can wuxuu awood u leeyahay inuu sameeyo 2 gogo 'wareega sanaadiiqda daasadaha kiisaska daasadda qalin, shaaha weelka ku shubi kara. Waxay si otomaatig ah u quudisaa oo u samaysaa qaabab tin ah oo aad rabto. Waxay sameyn kartaa cabirro kala duwan oo ah sanduuqyada daasadaha ah gasacadaha iyadoo loo beddelayo dhinta. Waxay badbaadin kartaa shaqooyinka iyo isticmaalka tamarta oo yar.